Sheekada filimka Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga: Ma ahan fariin saameyn xoogan wadato – Filimside.net
Sheekada filimka Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga: Ma ahan fariin saameyn xoogan wadato
February 2, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 2, 2019
Filimka Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Lag waa mid murankiisa wato wuxuuna ka hadlaa in dadka isku jinsiga ah iska heli karaan ama is jeclaan karaan waxaana daawashada mashruucaan lagu soo beegay xili sanadkii hore dowlada Hindiya meesha ka saartay qodobkii 377 oo mamnuuci jiray in labo qof isku jinsi ah is guursan karaana ma isla noolaan karaan!
Waxaa jiraan filimo horey uga hadleen in labo qof isku jinsi ah isku soo dhawaan karaan ama cilaaqaad yeelan karaan waxaana ka mid ah FIRE , ALIGARH , ANGRY INDIAN GODDESSES , MY BROTHER NIKHIL , MARGARITA WITH A STRAW  haatana liiskaas waxaa kusoo biiray filimka EK LADKI KO DEKHA TOH AISA LAGA oo aysan shacabka Hindiya dhan soo wada dhaweynin!
Jilaayaasha Filimkan: Anil Kapoor, Sonam Kapoor Ahuja, Rajkummar Rao, Juhi Chawla, Brijendra Kala, Madhumalti Kapoor
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 1-daqiiqo
Fariinta Kooban Filimkan: Mashruucaan wuxuu ka hadlaa gabbar jecel gabbar kale balse aan bulshadeeda dhaqan ahaan ka ogolaaneyn. Sweety (Sonam Kapoor Ahuja) waxay ku nooshahay Mongal oo Punjab ka tirsan waxaana aabo u ah Balbir Singh Chaudhury (Anil Kapoor) oo leh warshad dhar soo saarto waxayna gabadhan dhameesaneysaa waxbarashdeeda ayadoo aabaheed uu baadi goob u galaayo wiilka ku haboon inay guursato.
Laakiin Sweety (Sonam Kapoor Ahuja) walaalkeed xukunka iyo amarka badan Babloo (Abhishek Duhan) ayaa ogaanayo inay qof jeceshahay waxayna aadeysaa Delhi si ay jaceylkeeda ula kulanto sidoo kalena walaalkeed wuu daba galaa balse wey ogaanaa weyna ka baxsanee reerkeeda.
Kadib waxay tageysaa goob ruwaadayaha lagu sameeyo waxayna halkaas kula kulmeysaa Director-ka ruwaayadaha sameeyo Sahil Raza (Rajkummar Rao). Waxayna garab siineysaa kooxda ruwaadan sameyso kadibna Sahil Raza (Rajkummar Rao) wuu ka helaa Sweety.
Laakiin Sweety walaalkeed Babloo (Abhishek Duhan) ayaa goobta ruwaayada lagu sameeyo imaanayo laakiin Sahil Raza (Rajkummar Rao) ayaa ku caawinaayo Sweety markale inay walaalkeed ka baxsato.
Kadib Sahil Raza (Rajkummar Rao) wuxuu Sweety usoo raacaa deegaankeeda Mongal wuxuuna iska dhigaa qof deegaanka u yimid inuu seminar ku qabto meesha waxaana garab siineyso Chatro (Juhi Chawla).
Laakiin Sweety walaalkeed Babloo wuxuu aabihiis Balbir Singh Chaudhury (Anil Kapoor) u sheegayaa in gabadhooda reer Punjab jeceshahay nin Muslim ah waa Sahil Raza (Rajkumar Rao). Wuxuu go’aan ku gaaraa aabo Balbir Singh Chaudhury (Anil Kapoor) inuu gabadhiisa ku daro nin reer Punjab ah oo ay isku dhaqan yihiin.
Balse Sahil Raza (Rajkumar Rao) wuxuu la kulmaa qoyska Sweety asigoo u heesto in Sweety jeceshahay sidoo kalena lagu dari doono haddii uu aabo Balbir Singh Chaudhury (Anil Kapoor) jaceylkiisa u sheegto.
Sahil Raza (Rajkumar Rao) ayaa si qaas ah ula kulmaayo Sweety wuxuuna u sheeganaa jaceylkiisa iyo inuu doonayo inuu guursado. Laakiin Sweety runta ayay u sheegeysaa Sahil oo ah inay gabbar kale jeceshahay waligeedna aysan isaga ama nin kale jeclaanin dooqeedana yahay gabadha ay sida qarsoodida ah u wada xariiraan inay is guursadaan!!!
Haddaba qaybaha dambe filimkan waxaa loo daawan doonaa Sonam Kapoor ma heli doontaa gabadha ay jeceshahay, Aabo Balbir Singh Chaudhury (Anil Kapoor) gabadhiisa maku dari doonaa nin reer Punjab ah sidoo kalena Sahil Raza (Rajkumar Rao) jaceylkiisa ma heli doonaa?
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan: Gabadha filimkan Director ka ah Shelly Chopra Dhar waxay la imaaday sheeko Bollywood-ka aan la jecleyn in laga hadlo waxayna is dhahday ka faa’iideeso in dhawaan dowalada Hindiya meesha ka saartay qodobkii dastuuriga ahaa in labo isku jinsi ah is guursan karin ama nolol wadaagi karin laakiin gabadhaan waxay hilmaantay in dadka Hindiga dhaqankooda ku adag yihiin fariintana muran badan dhalin doonto sidoo kalena kaliya reer magaalka qaarkood soo dhaweyn doonaan.
Sidoo kale filimkan shactiro kusoo jiidaneyso ayuu leeyahay laakiin sida guud qaabka fariinta loo dhigay habacsanaan xoogan ayaa ka muuqato sidoo kalena si adag oo saameyn leh kuma dhamaanayo.
Bandhiga Jilaayaasha: Sonam Kapoor Ahuja guurkeedii kadib waa filimkii ugu horeeyay oo ay duubtay oo shaashadaha loo saaray waxay dooratay door muran badan dhalin karo sidoo kalena atirisho walbo sameyn karin. Bandhigeeda waa mid wacan laakiin fariinta mashruucaan oo liidato awgeed Sonam doorkeeda waa mid wacan laakiin aan laheyn saameyn weyn.
Anil Kapoor ayaa xadday bandhiga filimkan wuxuuna la yimid saameyn aan caadi ahayn dhanka shactirada iyo dareenka qiirada badan uu jilaayo waa halyee door walbo kasoo dhalaali karo.
Rajkummar Rao hogaamiye uma eko doorkiisa waa mid caawiye ah sidoo kalena kaalintiisa wuu ka baxday waana jilaa ku wacan doorashada fariimaha kala duwan.
Cajiib Juhi Chawla door wacan oo shactiro iyo kaftan ku dheehan ayay filimkan ka qaadatay waana qof waaya arag ah oo si wacan kuu soo jiidaneyso.
Dhamaan jilaayaasha kale ee doorka caawiyaha ah ku leh filimkan bandhigooda ma xumo laakiin isku xirka ayuu mashruucaan xoogaa ka yara liitaa.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkan: Shactirada iyo kaftanka filimkan oo xiiso leh iyo bandhiga jilaayaasha oo aad u wacan.
Muxuu Ku Liitaa Filimkan: Fariintiisa oo ah mid qof walbo aan soo dhaweyn doonin iyo halka saac dambe oo aad u liito isku xir ahaan.
Qiimeynta Filimkan: 2.5 (Labo Xidig iyo bar)
Gunaanad: Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga waa filim fariin qof walbo xiiso galin doonin xambaarsan balse leh shactiro iyo mada daalo qaybaha kaar laakiin mashruucaan dhanka Boxoffice-ka ama tiyaatarada dad badan masoo dhaweyn doonaan kaliya reer magaalka weliba kuwa ugu ilbaxsan ayaa macquul ah qaybo ka mid ah inay daawadaan taasina waxay ka dhigan tahay inuu culees xoogan la kulmi doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga:
Waxaa Aqrisay 716